Global Voices teny Malagasy » Ekoatora sy Kôlômbia No Manefa Be Indrindra Amin’ilay Olan’ny Sisintany · Global Voices teny Malagasy » Print
Ekoatora sy Kôlômbia No Manefa Be Indrindra Amin'ilay Olan'ny Sisintany
Voadika ny 02 Mey 2018 8:52 GMT 1	 · Mpanoratra Daniela Gallardo Nandika (fr) i Annick Battesti, avylavitra
Sokajy: Ekoatora, Kolombia, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka
Sary nozaraina be tao amin'ny media sosialy, ahitàna ireo telo mpanao gazety avy amin'ny gazety mpiseho isanandro El Comercio, izay voamarina ny famonoana azy ireo tamin'ny marainan'ny 13 Aprily 2018.
Niteraka fahatohinana be teny anaty media, izay nampahafantatra tamin'ireo mpikirakira zavamahadomelina sy mpampihorohoro fa tsy hisy hiàla eo, ilay fakàna an-kery sy famonoana ireo Ekoatoriàna telo mpanao gazety notànan'ny Front Oliver Sinisterra, tarihan'ilay mpanohitra avy amin'ny FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie)  fantatra amin'ny anarana hoe “Guacho”. Ny Filoha Moreno, izay hita ho tohina tokoa, dia nanamafy tamin'ny 13 Aprily lasa teo, ny zavatra ratsy indrindra mety hitranga rehefa misy fakàna an-kery : ny fahafatesan’ ny tsy manantsiny. “Ho an'i Paúl, tsy hisy hitsahatra eo. Ho an'i Javier, tsy hisy hitsahatra eo. Ho an'i Efraín, tsy hisy hitsahatra eo. Tsy hisy hitsahatra eo, tsy hisy hitsahatra eo, tsy hisy hitsahatra eo…” izany no re kiakiahan'ireo mpanao gazety  avy amin'ireo media ao amin'ny firenena, latsa-dranomaso teny anatin'ireo famoriana sy fiaretantory.
Amin'ny alàlan'ilay fanentanana #NosFaltan3 (banga 3 izahay), takian'ireo Ekoatoriàna ny famotsorana ireo mpanao gazety mpiray tanindrazana aminy tazonin'ireo mpanohitra avy amin'ny FARC any amin'ny sisintany Kôlômbiàna. Sary nopihan'ny Notimundo .
Nilaza tamin'ny Global Voices i Leonardo Ponce, mpanao gazetin'ny Quito hoe:
Zava-baovao ho an'ny rehetra ny olana atrehantsika ankehitriny amin'ny maha-mpanao gazety, olompirenena ary firenena, niandry antsika teny an-kodimirana ilay izy. Tsy nivonona hiatrika karazan-javatra tahaka izany isika ary mety ho fiantraikany aterak'izany ny hetsika ateraky ny koropaka itambaran'ny maro, na andrana fanozongozonana ara-politika.
Andersson Boscán, venezoeliàna mpanao gazety nonina tao Ekoatera efa hatry ny ela, no manome antsika ny fomba fijeriny :
Firaisana tsy mbola nisy toa azy no nasehon'ireo mpiray asa, firotsahana hanaitra ireo manampahefana izay efa toa adino tanteraka fahiny, no sady fahamatorana nasiônaly mba hahatsapàna fa androany, mihoatra noho ny resaka vaovao, resaka ain'olombelona sy fiarovana no atao.
Nanao tatitra momba ilay raharaha i Ponce, hatramin'ny nanamafisana ny fisian'ny fakàna an-kery ka hatramin'ny fanambaràna ny fahafatesan'ireo namana sady mpiray asa aminy. Tsaroany ireny fotoana ireny:
Fantatray fa nitranga ilay izy, saingy nifikiranay mandrakariva izay mety ho tara-panantenana kely nisy. Fony maty ilay taratra, teny amin'ny Plaza Grande de Quito aho. Tsaroako fa niato nandritra ny iray segondra ny fotoana noho ireo teniny (an'ny filoha Moreno nanamafy ilay famonoana), avy eo naneho ny hirifiriny i Plaza. Narahan'ny haromotana, hatezerana, ary fanaintainana…
Boscán koa nilaza ny amin'io 13 aprily 2018 io :
Es difícil decirlo. De alguna forma, cuando los ministros comparecieron tras la noticia, no lo hicieron ante 50 periodistas, sino 50 víctimas, 50 personas que se veían en esos cadáveres con el “pude ser yo”; en la cabeza. Así que no creo ni de lejos que haya sido la mejor cobertura. Hay demasiadas emociones en medio.
Sarotra hazavaina. Amin'ny lafiny iray, rehefa nipoitra taorian'ilay vaovao ireo minisitra, tsy nanoloana ireo mpanao gazety niisa 50 no nanaovan-dry zareo izany, fa teo anoloan'ireo 50 niharam-boina, olona 50 izay mahita ny tenany ao anatin'ireny vatana mangatsiaka ireny miaraka amin'ny ao an-tsaina hoe “mety ho izaho no teo amin'ny toerany”. Amin'izany, tsy mino aho hoe nahavita nitatitra tsara ny zavanisy, tena tsy izany velively. Tena rakotra fihetsehampo tafahoatra.
Fanindroa tamin'ny fakàna an-kery teny amin'ny sisintany : manambara olana
Na mbola tsy naverina aza ny vatana mangatsiakan'ireo mpanao gazetin'ny El Comercio, nilaza ny minisitry ny atitany, César Navas, tamin'ny 17 Aprily fa nisy fanafihana iray nataon'ny Front Oliver Sinistierra. Nalaina an-kery tao amin'ny faritanin'i Esmeraldas i Oscar Villacís sy Katty Velasco. Araka ny nambaran'ilay minisitra, i “Guacho” izy tenany mihitsy no nandefa ho an'ny minisitra ny porofon'ny mbola fahaveloman-dry zareo. Tao anaty lahatsary  iray naseho nandritra ny tafa natao ho an'ny gazety, nangatahan'ireo takalonaina ny Filoha Moreno mba hanao izay rehetra azony atao hanafahana azy ireo. “Mba tsy hanjo anay izay nahazo ireo mpanao gazety. Tsy misy idiranay ity ady ity”, hoy ny iray amin'ireo takalonaina.
Nanomboka ny 24 Aprily, ireo mpaka an-kery dia tsy nifandray mihitsy tamin'ny fanjakàna ekoatoriàna, na nandefa porofo vaovao manambara fa mbola velona i Oscar sy Katty, na nanao fitakiana vola.
Misintaka i Ekoatora tsy ho mpanelanelana ny fifampiresahana hitadiavana fandriampahalemana ifanaovan'ny ELN (tafi-panafahana nasiônaly) sy Kôlômbia
Ny 26 aprily no fetra napetraky ny Filoha Moreno ho an'ireo manampahefana mba hisamborana an'i “Guacho”. Nambarany ampahibemaso fa raha sanatria tsy voahaja io fetra io, dia hangataka azy ireo izy “mba hisintaka”. Etsy ankilany, nanapaka hevitra izy ny tsy hampiantrano ao Ekoatora ny dinidinika fikatsahana fandriampahalemana ifanaovan'ny Tafi-panafahana Nasiônaly (ELN, rantsana iray hafa mpanao ady anaty akàta kôlômbiàna) sy ny governemanta kôlômbiàna . “Nangatahako ny filohan'ny governemanta mba hampiato ireo firesahana fandriampahalemana sy ny anjara asantsika amin'ny fiantohana io dingana fikatsahana fandriampahalemana io, raha mbola tsy manome antoka ny ELN hampitsahatra ny asa fampihorohoroana ataony”, hoy ny filoha tamin'ny fampahalalambaovao kôlômbiàna iray.
Ho an'ilay ekoatoriàna mpahay politika, Pablo Ruiz Aguirre, nanontanian'ny Global Voices, tsy maintsy jerena mifanaraka amin'izay pitsony rehetra ao aminy ilay olana :
Ny vanimpotoana misy ny toedraharaha dia tsy tokony hanosika antsika handray fanapahankevitra maimaika, nefa koa tsy milona, satria amin'izy ireny no itarafana ny fahaizana mitantana. Tsy maintsy halalinina ireo angona ara-tantara momba ilay olana, ny zavatra rehetra nanodidina ary izay mety hiseho. Eo no tsy maintsy ijoroana mba handaniana tetikady vaovao hiadiana amin'ny zavamahadomelina sy ny herisetra, na ho an'ny politikam-panjakàna, na ho an'ny drafitra miaramila.
Tohanany ihany koa ny hoe ny zavamahadomelina sy ny fivezivezeny no tena anton'ny olana :
Ny tantara, farafahakeliny ao Kôlômbia sy Meksika, dia mampianatra antsika fa ny ady mivantana atao amin'ny fivezivezen'ny zavamahadomelina nandritra ny ampolo taona maro dia tsy niteraka afa-tsy herisetra sy famoretana. Na ny Firenena Mikambana aza dia mihevitra ny hanao adihevitra momba ny fanaovana ho ara-dalàna na fandrindràna ny tsenan'ny zavamahadomelina. Tsy maintsy tadiavina ankehitriny izay vahaolana, eritreretina amin'ny endriny rehetra io zavamitranga ara-tsosialy io ary atolotra ireo vahaolana izay tsy ny zavamahadomelina no ho ivon'ny olana, fa ny olombelona.
Ireo fifandraisan'ny FARC sy Ekoatora : ny filoha teo aloha, Correa sy ny lazaina fa fifandraisany amin'ny ady anaty akàta
Ny 22 aprily 2018, nomen'i Lenín Moreno ny baiko hanaovana fanadihadiana momba ny fampielezankevitra tamin'ny fifidianana ny filoha teo aloha Rafael Correa, voampanga ho handray vola tamin'ny FARC. Nanomboka tamin'ny Martsa 2008 ireo tatitra mahabe adihevitra avy amin'ireo mpiady anaty akàta fahiny sy Correa, fony natomboky ny tafi-panjakana kôlômbiàna ny Hetsika Phénix  ary nandaroka baomba ny tobin'ny mpiady anaty akàta tao Angostura any Ekoatora. Nandritra io fanafihana io no niaraka maty taminà olona 23 hafa i Raúl Reyes, laharana faharoa tao amin'ireo mpanao ady anaty akata.
Azon'i Kôlômbia tao amin'ilay toby tsy ara-dalàna ireo porofo, indrindra fa ny solosaina iray an'i Reyes. Ilay filoha [kôlômbiàna] teo aloha, Álvaro Uribe, tamin'ny fanambaràna io vaovao io ho ren'ny rehetra, dia namboraka ny fisian'ny lazaina ho fifandraisan'ny FARC sy ny Filoha [Ekoatoriàna] tamin'izany fotoana izany, Rafael Correa. Avy hatrany dia notapahany ny fifandraisana diplaomatika tamin'i Bogotá. Taona iray taorian'io, 2009, nisy lahatsary iray namoaka an'i Mono Jojoy, mpitantana ambony ao amin'ny FARC, efa maty, niteny ny fanohanana ara-bola ho an'i Correa tamin'ny 2006, avy amin'ireo mpiady anaty akàta fahiny, tamin'ny fampielezankeviny nandritra ny fifidianana.
Taona folo aty aorian'ireo zavatra ireo, ary miaraka amin'ny olan'ny fandriampahalemana eny amin'ny sisintany kôlômbiàna, nasain'ny Filoha Lenin Morena hanaovana fanadihadiana ny mety ho fandraisana anjaran'ny FARC tamin'ny fampielezankevitra nataon'i Correa, izay mpiaradia taminy tamin'izany ary fampielezankevitra nandraisany anjara.
Raha toa ny famonoana ireo mpikambana telo tao amin'ilay tariky ny El Comercio ka nahafahana nandrefy tao Ekoatora ireo fiantraikan'ny fifanarahana fandriampahalemana ifanaovan'ny Kôlômbia sy ny FARC  dia namboraka ihany koa ny halalin'ny filentehan'ny faritra an-tsisintany tsikelikely ho ao anatin'ny herisetra sy ny fivezivezen'ny zavamahadomelina. Irin'ireo governemanta roa izany izao ny haka ny razan'ireo mpanao gazety, hangataka ny famotsorana ireo mpivady nalaina an-kery sy ny hamongorana ny tsy fandriampahalemana ao amin'ilay faritra manasaraka ny firenena roa tonta.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/02/118837/
 FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie): https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_armées_révolutionnaires_de_Colombie
 izany no re kiakiahan'ireo mpanao gazety: https://www.youtube.com/watch?v=uNfGQ-C5Gjc
 tsy hampiantrano ao Ekoatora ny dinidinika fikatsahana fandriampahalemana ifanaovan'ny Tafi-panafahana Nasiônaly (ELN, rantsana iray hafa mpanao ady anaty akàta kôlômbiàna) sy ny governemanta kôlômbiàna: https://www.tdg.ch/monde/eln-quito-accueillera-pourparlers/story/15601869
 Hetsika Phénix: https://fr.wikipedia.org/wiki/Opération_Phénix
 fiantraikan'ny fifanarahana fandriampahalemana ifanaovan'ny Kôlômbia sy ny FARC: https://fr.globalvoices.org/2018/04/04/223721/